Nin Mareykan ah oo booliis ah ayaa ka xaday ApplePod qaar Apple Store ah waana la ugaarsanayaa | Wararka IPhone
Waxa caadiga ah ayaa ah in tuugada ay ku daba jiraan booliska ku kacay falal sharci daro ah. Si kastaba ha noqotee, maanta waa sheeko xiiso leh oo dhac ah oo ka dhacday Dukaanka Apple, oo ay si sax ah u geysteen tuhmanaha ugu yar ee dhammaan, booliska.
Wakiil Mareykan ah ayaa laga helay Dukaanka Apple isagoo ka faa'iideysanaya kormeer uu ku xaday AirPods. Sameecadaha ugu caansan ee shirkada Cupertino ayaa mar kale waxaa ka taagan muran, malaha boliiska ma uusan dooneynin inuu sugo waqtiyada dhalmada badan ee ay hayaan.
Ayona McGillberry waa magaca wakiilka maamulka ee ku dhex milmay khilaafkan xoogaa gaar ah. Xaqiiqdu waxay tahay inaanan fahmin sida sarkaal booliis ah uu qatar u gelin karo shaqadiisa (Waxay ahayd sidaas ...) xatooyo shey aan xitaa gaarin labo boqol oo euro. Isniintii la soo dhaafay, qiyaastii 14: 00 pm ee Metairie (Louisiana), wakiilku wuxuu ku sugnaa Apple Store oo ka qaybgalaya dayactir ku saabsan iPhone-kiisa (oo aad uga qaalisan AirPods). Wuxuu codsaday inuu amaahdo qaar ka mid ah AirPods si uu u tijaabiyo, wax caadi ka ah Apple Store iyo inaan kugu martiqaadayo inaad sameyso, laakiin tani waxay ahayd bilowgii dhammaadka xun.
Markuu wakiilku dhammeeyay meheraddiisii ​​dukaanka Apple Store, go'aansaday inuu ka tago aasaaska isagoon hubin AirPods-ka amaahda lagu siiyay si loo tijaabiyo. Waxaa la duubay iyada oo ka tagaysa dukaanka iyada oo leh sameecadaha dhagaha iyada oo aan muujin xiisaha ugu yar ee bixinta qiimaha lagu iibiyay. Waxa cad ayaa ah in wakiilkani aanu ahayn kii ugu caqliga badnaa ee xaafada, maadaama xogta aad bixisay si aad uga codsato dayactir ku kaydso Apple Store ay u oggolaanayso dabeecadda laga hadlayo in daqiiqado gudahood lagu helo. Noqo sida ay doonto ha noqotee, sheekadan gaarka ah ayaanan farxad u lahayn wakiilkan. Dabcan, jacaylka alaabada tufaaxa ayaa kaa dhigi kara inaad lumiso shaqadaada haddii aadan taxaddarin ... iyo ka hor intaanan faallo ka bixin, wax walba waxay muujinayaan inaysan ahayn "kormeer" gabi ahaanba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Sarkaal booliis Mareykan ah ayaa AirPod ka xaday Apple Store waana la ugaarsadaa
9x24 Podcast: Maareeyayaasha Furaha VS iCloud Keychain
6 bilood bilaash ah Apple Music gawaarida cusub ee kooxda Fiat iyo Volkswagen